Cách Làm Thịt Heo Quay Da Giòn Ngon Như Ngoài Hàng | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: Cách Làm Thịt Heo Quay Da Giòn Ngon Như Ngoài Hàng | Muasalebang in Muasalebang
1 Ungayenza kanjani ingulube e-crispy ethosiwe esitokisini esingenawo uwoyela
1.1 Izithako zokwenza inyama ethosiwe e-crispy nge-fryer engenawo amafutha
1.2 I amathuluzi ekhishini esetshenzisiwe:
1.3 Izinyathelo zokwenza inyama yengulube e-crispy ethosiwe epanini elingenawo uwoyela
2 Indlela yokwenza ingulube e-crispy ethosiwe nge-oven glass
2.1 Izinyathelo zokwenza ingulube e-crispy ethosiwe nge-ovini yengilazi
3 Qeda bese uveza isidlo
4 Ividiyo yokuthi ungayenza kanjani inyama yengulube e-crispy ekhaya
5 Amathiphu okwenza ingulube eyosiwe e-crispy
5.1 Indlela yokukhetha ingulube lapho wenza ingulube eyosiwe e-crispy
5.2 Amanothi okwenza ingulube eyosiwe e-crispy
6 Indlela yokwenza ingulube yemifino e-crispy ethosiwe
6.1 Izithako zenyama yengulube egazingiwe
6.2 Amaresiphi engulube eyosiwe enesikhumba esicwebezelayo
7.1 Ungakhetha kanjani ingulube lapho wenza ingulube e-crispy roast?
7.2 Iresiphi yokwenza inyama yengulube eyosiwe?
Ungayenza kanjani ingulube e-crispy ethosiwe esitokisini esingenawo uwoyela
Izithako zokwenza inyama ethosiwe e-crispy nge-fryer engenawo amafutha
1 piece of ubhekeni cishe 1kg kuphela
1 ithisipuni pepper
1 ithisipuni ezinhlanu zezinongo eziyimpuphu
1 ithisipuni i-garlic powder
1 ithisipuni ushukela
1 isipuni soy sauce
1/2 ithisipuni soy sauce for pho
1 ithisipuni isinamoni iwayini lamabhilikosi
I amathuluzi ekhishini esetshenzisiwe:
Izinyathelo zokwenza inyama yengulube e-crispy ethosiwe epanini elingenawo uwoyela
Isinyathelo 1: Khetha ukuthenga inyama
– Ubhekeni kufanele ukhethe kuphela ukuthenga ucezu olukhulu ukuze uma ucezu lwenyama lubekwe ethreyini eyisicaba, isikhumba sengulube sizoqhuma ngokulinganayo uma sisosiwe. Isiqephu sengulube yengulube kufanele sikhethwe kuphela singanciki kakhulu futhi singabi namafutha kakhulu ukunambitha kangcono. Inyama iyintsha futhi inombala obomvana ogqamile, inyama iqinile, isikhumba sincane. Ungqimba lwamafutha lunombala ocwebezelayo, lunokuvumelana okuqinile, inyama kufanele ifakwe ngaphandle kokuba yinde.
Isinyathelo sesi-2: Geza inyama
– Isisu sengulube sigundwa kuphela esikhumbeni, bese sihlanjululwa kahle, bese sishaywa ngamathawula wephepha. Ingulube egcinwe efrijini ifriji kufanele iqedwe ngokuphelele ukuze icutshungulwe.
Isinyathelo sesi-3: Sika inyama
– Sebenzisa ummese ukusika imigqa emi-5-7 iqonde phezulu, ngakho-ke lapho uhlanza inyama, isinongo sizomunca ngokushesha.
Isinyathelo sesi-4 Hlanganisa i-marinade yenyama
– Ubeka usawoti, ushukela, pepper, izinongo eziyisihlanu eziyimpushana ezilungiselelwe ngenhla endishini encane futhi uhlanganise kahle, ukuze sithole i-marinade eyomile eyimpuphu.
– Isoso ye-soy, isoso ye-soy ye-pho, newayini lebhilikosi lesinamoni kwesinye isitsha futhi ugovuze kahle ukuze lincibilike, sithola ingxube yenyama ye-marinade.
Isinyathelo sesi-5: Marinate inyama
Beka ucezu lwenyama ebhodini lokusika inyama ibheke phezulu, isikhumba singezansi. Fafaza ingxube yempushana eyomile ngokulinganayo phezu kwenyama bese uyihlikihla ngokulinganayo, bese ufafaza ingxube ye-marinade phezu kwenyama, uqhubeke uyigcoba yonke inyama. Qaphela: ungachithi isithokelo esikhumbeni sengulube, vele uhambise inyama. Marinate inyama cishe imizuzu engama-30 ukuya ehoreni eli-1 ngaphambi kokuba yosiwe.
Isinyathelo sesi-6: Pheka inyama
Ubeka ucezu lwenyama epuletini, isikhumba phezulu bese usifaka phakathi i-microwave dubula imizuzu emi-4. Vula i-microwave ukuze ubone ukuthi isikhumba siphekwe uhhafu, bese uvala umnyango we-microwave bese upheka enye imizuzu engu-4. Uma ungenayo i-microwave, ungayibilisa inyama ize ivuthwe, bese uyikhipha ngokushesha, bese uyi-marinate.
Isinyathelo sesi-7: Isikhumba sengulube ye-tattoo
– Ucezu lwenyama emva kokuvuthwa kwesikhumba, khipha bese usebenzisa inqwaba yezikebhe ukwenza i-tattoo, uvele uyidwebe izikhathi eziningi esikhumbeni, ngakho-ke uma isosiwe, isikhumba sengulube sizoqhuma, kodwa singaphumi.
Isinyathelo sesi-8: Hlanganisa ingxube ukuze usakaze esikhumbeni sengulube
– Okulandelayo, ubeka isipuni esingu-1 sewayini endishini encane, engeza isipuni esingu-1 sikasawoti, ithisipuni engu-1 kaviniga bese ugoqa kuze kuncibilike usawoti. Bese usebenzisa ibhulashi ukuze usakaze uviniga esikhumbeni sengulube ngokulinganayo, ungasakaza izikhathi ezingu-2 noma usakaze ingxube yamanzi kaviniga ngokuphelele, yivumele ihlale imizuzu engaba ngu-10, bese usebenzisa ithawula lephepha ukuze usule isikhumba.
Isinyathelo sesi-9: Yenza ingulube eyosiwe ngesithombo esingenawo uwoyela
Faka ingxenye ngayinye yenyama esitofini bese uyivula ku-180ºC imizuzu engu-45. Ngemuva kwemizuzu engu-45, ukhipha inyama bese uxubha isikhumba ngendwangu encane yamafutha okupheka. Bese uqhubeka nokufaka ku-fryer ku-200ºC eminye imizuzu eyi-10.
Ungasebenzisa imikhiqizo ukugcoba inyama yengulube njenge: Electrolux grill, Sunhouse grill, Panasonic grill, Sharp microwave, Toshiba microwave, electrolux microwave,
Indlela yokwenza ingulube e-crispy ethosiwe nge-oven glass
Njengendlela yokwenza ingulube ethosiwe e-crispy esitokisini esingenawo uwoyela. Udinga ukulungiselela izithako ezifanayo njengeresiphi engenhla. Ngamathuluzi, uzolungisa i-ovini yengilazi yokugcoba inyama.
Izinyathelo zokwenza ingulube e-crispy ethosiwe nge-ovini yengilazi
Ukwenza ingulube e-crispy egazingiwe kulula kakhulu ingilazi kuhhavini Landela lezi zinyathelo ezingu-6:
– Isinyathelo 1: Lungisa isisu sengulube kuqala bese uyibhaka kafushane ukuze ususe ukungcola.
– Isinyathelo sesi-2:. Gcoba ingxube yezipuni ezi-2 zikaviniga, 1/2 isipuni sikasawoti esincibilikisiwe esikhumbeni senyama ukwenza isikhumba sibe crispy uma sithosiwe.
– Isinyathelo sesi-3: Xuba ingxube ukuze marinate inyama njengoba ngenhla.
– Isinyathelo 4: Thatha ingxube yezinongo bese uyigcoba ngokulinganayo ezingxenyeni zenyama, hhayi esikhumbeni. Bese ubeka inyama endishini, uyimboze ngefilimu yokudla bese uyibeka esiqandisini okungenani amahora angu-3-4 ngaphambi kokuphenduka.
– Isinyathelo sesi-5: Shisisa ihhavini yengilazi ibe ngu-250ºC imizuzu emi-5. Ngemuva kokuthi ihhavini selishise, beka ucezu ngalunye lwenyama egayiwe bese uyifaka ethreyini. Bese ufaka ithreyi kuhhavini bese uyivula ku-200ºC imizuzu engu-20.
Isinyathelo sesi-6: Ngemuva kwemizuzu engu-20 yokubhaka, khipha ithreyi yenyama bese uxubha amafutha okupheka nge-marinade kuwo wonke ucezu lwenyama. Phendula inyama, bese uyifaka kuhhavini eminye imizuzu engu-20 ekushiseni kuka-200ºC ukwenza ingulube eyosiwe ibe crispy futhi ibe mnandi.
Qeda bese uveza isidlo
Beka inyama ebhodini lokusika bese usika ingulube eyosiwe ibe yizicucu ezilumayo. Inyama eyosiwe e-crispy ingadliwa nelayisi noma i-vermicelli iyathandeka kakhulu, ucezu lwenyama luthambile futhi lumnandi, isikhumba si-crispy futhi asinzima nhlobo. Lesi sidlo esiphakelwa ngamakhukhamba kanye nenkomishi engu-1 yesoso ye-chili enogalikhi yezinhlanzi simnandi, kuqinisekisiwe ukuthi siyalutheka.
Iqatha ngalinye lenyama eyosiwe yesikhumba, elimnandi, elinephunga elimnandi, kanye nesisu senyama yengulube elicwiliswe ku-chilifish sauce limnandi.
>>> Bona okuningi: Jabulela ingulube eyosiwe ngendlela ekhethekile.
Ividiyo yokuthi ungayenza kanjani inyama yengulube e-crispy ekhaya
Nansi ividiyo yokuthi ungayenza kanjani ingulube e-crispy egazingiwe ngempumelelo eqinisekisiwe evela ku-YouTube:
Ukukhala Kweseluleko. Bheka iresiphi engezansi ukuze wenze ingulube eyosiwe yomndeni wonke!
Amathiphu okwenza ingulube eyosiwe e-crispy
Indlela yokukhetha ingulube lapho wenza ingulube eyosiwe e-crispy
– Ukuhlanzeka, okusha, ukuqinisekiswa kwekhwalithi kuyisici esiphezulu lapho ukhetha noma yisiphi isithako sokudla kanjalo nokukhetha kwengulube egazingiwe. Ukuze ube nesikhumba esiphundu esiphundu sengulube yengulube, udinga ukukhetha lezi izingcezu ubhekeni fresh, ucezu lonke, izingxenye ezimbili mafutha, 1 ingxenye fat.
– Ukuze uqinisekise ukukhetha okuhle kwenyama, zama ukucindezela inyama ngezandla zakho, uma inyama inokunwebeka kancane futhi, lena inyama entsha. Uma omama bezindlu bethenga inyama esitolo, qaphela usuku nesikhathi sokukhiqiza.
Amanothi okwenza ingulube eyosiwe e-crispy
– Ingulube egazingiwe enesikhumba esicwebezelayo izolahlekelwa ukunambitheka kwayo okuhlukile nokuba mnandi uma izithako ziyimpushana yezinongo ezinhlanu.
– Ukugcina futhi Sebenzisa i-fryer engenawo uwoyela ngokufanelekile, kufanele udwebe ungqimba lwephepha elimuncayo phansi kwethreyi ukuze kuthi lapho uphotha amanoni amaningi enyameni azomunca ephepheni. Kamuva, ukugeza nokuhlanza ibhodwe nakho kuzoba lula.
Ngemuva kokushisa, kungcono ukushiya inyama kuhhavini ukuze iphole, bese uyikhipha.
>> Bona okuningi: Indlela yokwenza izimfanzi ezibabayo nesitshulu senyama, indinganiso yaseNtshonalanga.
Indlela yokwenza ingulube yemifino e-crispy ethosiwe
Izithako zenyama yengulube egazingiwe
Izimbambo ezincane zemifino 100g
Isinkwa 1 isinkwa
Isipuni se-5-spice powder
Inkomishi kafulawa we-Tapioca
Ubisi lukakhukhunathi ½ inkomishi
Amafutha e-cashew 1 isipuni
Izinongo: pepper, imifino yemifino
Amathuluzi: Isikhunta esingunxande, ipani, isitofu segesi, Ama-Autoclaves…
Amaresiphi engulube eyosiwe enesikhumba esicwebezelayo
– Isinkwa: Sika ngobude, susa iziphetho ezimbili kanye nomnyombo wekhekhe. Bese ugoqa ikhekhe bese uyifaka esikhunjini esilungisiwe.
– Izimbambo ezincane ezidla imifino: zisike zibe izingcezu ezingaba ngu-2cm ubukhulu bese ucwilisa emanzini zize zithambe. Khipha izimbambo ezincane ezidla imifino, zikhame zomile bese u-marinate ngembewu yesinongo nesoso yesoya.
– Thatha inkomishi, ncibilikisa izipuni ezi-2 zamafutha e-cashew cishe ne-1/4 yethisipuni yezinongo eziyimpuphu ezinhlanu.
Isinyathelo sesi-2: Yenza ingulube ibe namafutha.
Ukwenza ingulube yemifino ibe ngamafutha, wenza ikhishi libilise ubisi lukakhukhunathi nofulawa we-tapioca. Ngenkathi ingxube ibila, gubungula kahle ngezandla zakho ukuze wenze inhlama enokuvumelana okusesilinganisweni bese ucisha ukushisa. (Kutuswa ukugoqa kuze kube yilapho impushana ichitheka ngokuphelele ngaphambi kokuyibeka esitofini.)
Isinyathelo sesi-3: Thosa izimbambo zemifino
Ngemuva kokuvuthwa, gazinga ngamafutha ashisayo kuze kube nsundu yegolide izinhlangothi zombili bese ukhipha.
Isinyathelo sesi-3: Inyama yengulube ephekiwe
Faka amafutha engulube enziwe esinyathelweni sesi-2 ngokulinganayo esikhunjeni, qhubeka uthosa izimbambo ezincane. Bese uqhubeka usakaza ungqimba lwamafutha engulube yemifino futhi ekugcineni ngongqimba lwezimbambo ezincane.
Faka i-tray ku-steamer bese upheka imizuzu engaba ngu-20. Uma ungenayo i-steamer, ungayisebenzisa Umpheki kagesi ukushubisa le ngulube yemifino.
Isinyathelo sesi-4: Thosa inyama yengulube ethosiwe
Ngemva kokushisa ingulube yemifino, gcoba ingxube yamafutha e-cashew elungisiwe esikhumbeni sesinkwa bese usifaka ifriji. Ngemuva kwemizuzu engu-30, uyayikhipha, usike ingulube yemifino ibe yizicucu ezincane bese uthosa kuze kube yilapho inyama igolide, iphunga elimnandi futhi i-crispy.
Ngaphezu kwalokho, kulabo kini abafuna ukufunda indlela yokuthosa ingulube emnandi kodwa besaba amafutha athinta impilo. Sicela ubhekisele ezinhlotsheni i-fryer engenawo uwoyela lapha: I-Philips air fryer, I-Kalite engenawo uwoyela, I-Korea King-free fryer engenawoyela.
Ungakhetha kanjani ingulube lapho wenza ingulube e-crispy roast?
Ukuze ube nengulube eyosiwe emnandi kakhulu, udinga ukukhetha izingcezu ezintsha zesisu sengulube, izingcezu eziphelele, izingxenye ezimbili ezithambile, ingxenye eyodwa yamafutha.
Iresiphi yokwenza inyama yengulube eyosiwe?
Umbambo we-Vegetarian, isinkwa, impushana yezinongo ezinhlanu, ufulawa we-tapioca, ubisi lukakhukhunathi, uwoyela we-cashew